Konke odinga ukukwazi ngombani | Isimo Sezulu Senethiwekhi
ISpain yaphila emasontweni ambalwa edlule, entwasahlobo sekwephuzile isiphepho impela wadlula emanzini. Ngaphandle kwezimvula ezinamandla, okuhehe iningi labantu kwaba inani elikhulu lemisebe lokho kwenzeke futhi ngukuthi ngokwemininingwane esemthethweni babhaliswa kuze kube Imisebe engama-22.000. Lokhu kudale ukuthi abantu abaningi bafune ukwazi kabanzi ngalokhu okuhlaba umxhwele futhi okuyingozi Isimo sezulu.
1 Lapho imisebe ivela
2 Ungakanani umbani onawo
3 Yini imbangela yokunyakaza kwe-zig zag
Lapho imisebe ivela
Imisebe ayilutho olunye ngaphandle kokukhishwa okukhiqizwa kusuka amandla amakhulu anqwabelana emafwini. Imvamisa zenzeka lapho amazinga okushisa ephezulu futhi kunomswakama omningi emoyeni. Zivame kakhulu ehlobo ngoba umoya oshisayo ukhokhiswa ngokuhlangana nomoya obandayo. Lapho imvula ina, amafu akhipha amandla anjalo ngesimo semisebe.
Ungakanani umbani onawo
Umbani uqukethe amandla amaningi ongafinyelela kuwo ukuba ofayo. Kubalwa ukuthi imisebe ngayinye ilinganiselwa kumakhilomitha ama-5 ubude ngamasentimitha ayi-1 kuphela ububanzi, amandla akhishwa i-ray angaba amakhulu kune 5 billion joule of energy nge-amps efinyelela ku-200.000 nama-volts wezigidi eziyi-100.
Yini imbangela yokunyakaza kwe-zig zag
Lokhu kuhamba okufana nemisebe kungenxa yokuthi ukukhokhiswa okukhulu kwezinsimu zikagesi kubangelwa i-ionized bahlukane ama-ion amahle avela kokubi. Le ionization ayifani futhi iqala ukunyakaza sengathi inyoka futhi ikhiqiza i-zig zag eyaziwa kakhulu.
Ngiyethemba ngicacise imibuzo ethile mayelana nombani nombani, njengesifiso sokugcina ukukutshela lokho idolobha laseNingizimu Afrika iJohannesburg kulapho kufa imibani kakhulu minyaka yonke.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Konke odinga ukukwazi ngombani